I-China i-1mm i-PVC yasimahla abenzi bephepha kunye nabathengisi | Gokai
Iphepha le-foam le-1mm le-PVC lasimahla linobume beselula kunye nokupholisha umphezulu ogudileyo kwenza ukuba kube lukhetho olufanelekileyo lwabashicileli abakhethekileyo kunye nabenzi bebhilibhodi kunye nezinto ezifanelekileyo zokuhombisa. Iphepha lebhodi ye-PVC yebhodi isetyenziswe ngokubanzi kwiimpawu, iibhilibhodi, iziboniso kunye njl.
I-1mm yePhepha le-Foam yasimahla
Iphepha le-foam le-1mm le-PVC lasimahla linobume beselula kunye nokupholisha umphezulu ogudileyo kwenza ukuba kube lukhetho olufanelekileyo lwabashicileli abakhethekileyo kunye nabenzi bebhilibhodi kunye nezinto ezifanelekileyo zokuhombisa. Iphepha le-foam lebhodi le-PVC lisetyenziswe ngokubanzi kwiimpawu, iibhodi zeebhodi, imiboniso kunye nokunye. Iphepha le-PVC elinamagwebu lihlala liqinisekisa ukuthembeka, ukusebenza okuthembekileyo kunye nesiphumo esihle.
Inzuzo yebhodi ye-foam yasimahla ye-PVC
1.Strong kwaye ixesha elide
Ukuxhathisa kwe-PVC yasimahla yebhodi yegwebu, amandla oomatshini ahloniphekileyo kunye nokuqina kuzona njongo ziphambili zobunjineli ezisetyenziselwa ukwakha nakwizicelo zokwakha.
Amaphepha e-foam e-PVC akhaphukhaphu xa kuthelekiswa neplywood kwaye anokuqokelelwa ngokukhawuleza aze athunyelwe, okwenza ukuba ibe yindawo efanelekileyo yeplanga lomthi.
Unga lula usike, imilo, kwaye uncamathisele iibhodi amagwebu PVC ngokweemfuno.
Ibhodi ye-foam ye-PVC yinto ekhuselekileyo nenobuhlobo ye-eco esele isetyenziselwe ngaphezulu kwesiqingatha senkulungwane. Ayina sixa sikhulu se-formaldehyde njengezinye izinto zokuhombisa ngaphakathi.
Iphepha le-foam le-PVC liya kutshisa xa libekwe emlilweni. Nangona kunjalo, ukuba umthombo wokutshaya urhoxisiwe, baya kuyeka ukutsha. Ngenxa yomxholo wayo ophezulu we-chlorine, iimveliso zePVC ezandisiweyo zinempawu zokukhusela umlilo.
Ukuxhathisa ukufuma kwe-PVC yipropathi ebalulekileyo, kwaye abantu basebenzisa iibhodi ze-PVC zegwebu kwizicelo ezininzi zaselwandle.
Ibhodi ye-foam ye-PVC iza nepropathi echasayo kunye nozinzo lweekhemikhali oluya kuyigcina ikhuselekile nangexesha lokudibana kwemichiza.
8. Ukuthintela isandi
Iphepha le-foam le-PVC elandisiweyo ngamanye amaxesha lisetyenziselwa ukuthintela isandi. Ngelixa isandi sihlala singenakuvalwa ngokupheleleyo, ukunciphisa ingxolo okunokwenzeka kunokwenzeka.
0.8g / cm3—0.9g / cm3
Amandla eqine kwi-Yield Mpa
Imodyuli yeFlexual Mpa
Indawo yokuthambisa yeVicat ° C
Ukujija amandla okubamba uN
Amandla eChoppy Impact Amandla KJ / m2
Ukusetyenziswa kweBhodi yeGlasi ye-PVC
1) Ibhodi yentengiso kunye nebhodi yemiqondiso
2) Umboniso kunye nomboniso
3) Iphepha lesibhengezo lokuprinta, lokukrola kunye nokusika
4) Ukuhonjiswa kodonga lokwahlula kunye nokubonisa iwindow
Egqithileyo Ifenitshala yebhodi ye-foam ye-20mm ye-PVC
Okulandelayo: UV eziprintiweyo foamboard 2mm